चितवनलाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्दै आएको हंस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. ले आफ्नो आठौं वार्षिकोउत्सवको अवसरमा बुधबार रक्तदान एवं सदस्य सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । नारायणगढ आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा ५ जना महिला र ४६ जना पुरुष गरी जम्मा ५१ जनाले रक्तदान गरेका छन् । यसै गरी संस्थाका विभिन्न ६९ जना शेयर सदस्यका साथै ६ जना कर्मचारीलाई समेत सम्मान गरिएको छ । दिनेश कुमार चुकेको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति, चितवनका प्रमुख श्री कृष्ण कुमार डल्लाकोटी प्रमुख अतिथि रहेका थिए । प्रमुख अतिथि डल्लाकोटीले सहकारीहरु सहकारीको मुल्य मान्यता र सिद्धान्त तथा संस्था स्वयंको विनियमले तोकेको परिधिभित्र रही सदस्यहरु र समुदायप्रती जिम्मेवार हुदै संचालन हुनुपर्ने बताए । सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यलयका निमित्त प्रचार्य रामभक्त रानाभाट, जिल्ला सहकारी संघ चितवनका अध्यक्ष टिकाराम भट्टाराई, नेपाल पोल्ट्री महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्ट, पूर्व सभासद् गिता वाग्ले विशिष्ट अतिथि थिए । कार्यक्रमा संस्थाका अध्यक्ष दिनेश कुमार चुकेले रक्तदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै संस्थाको मुख्य उद्देश्य भनेको शेयर सदस्यहरुको सन्तुष्टी र सामाजिक सेवा रहेको बताए । संस्थाका उपाध्यक्ष श्री बाबुराम अधिकारीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए । हंस बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था लि. को पहिलो सेवाकेन्द्र सौराहचोक टाँडीको सातौ स्थापना दिवसको अवसरमा पुस १५ गते उक्त स्थानमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर समेत गरिने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको अवसर पारेर नारायणगढका लायन्स लियो क्लबले भरतपुर अस्पतालमा रहेका अपाङ्ग बिरामीहरुलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको छ । लायन्स÷लियो क्लब अफ नारायणगढ बालकुमारी र लायन्स क्लब अफ नारायणगढ नारायणीको संयुक्त आयोजनामा आइतबार अस्पतालको स्पाइलन इन्जुरी केन्द्रमा रहेका बिरामीहरुलाई ब्लाङ्केट र फलफूल वितरण गरिएको हो । लायन्स क्लब अफ नारायणगढ बालकुमारीका अध्यक्ष बालगोपाल चुकेले मेरुदण्ड भाँचिएर उपचार गराइरहेका विभिन्न आठ जना बिरामीलाई ब्लाङ्केट र फलफूल वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । चिसो बढ्दै गएको र आर्थिक अवस्था न्यून भएका बिरामीहरुले त्यहाँ उपचार गराइरहेकाले उनीहरुलाई न्यानोका लागि ब्लाङ्केट वितरण गरेको चुकेको भनाइ थियो । पाँच वर्ष अगाडि स्थापना भएको स्पाइनल इन्जुर केन्द्रलाई विभिन्न संघसंस्थासँग मिलेर बोर्ड गठन गरेर सञ्चालन गरिएकोमा दुई हप्ता अगाडिदेखि भरतपुर अस्पतालको स्वामित्वमा ल्याइएको छ । धेरै बिरामीहरु उपचार गराइरहेको अस्पतालले आफ्नै शुल्कमा समेत बिरामी उपचार गर्दै अबको दिनमा सेवा विस्तार गर्दै जाने अस्पतालका मेसु बताउनुहुन्छ ।
राजधानी बाहिरको एक मात्रै स्पाइन इन्जुरी केन्द्रमा तराईका २३ जिल्लाका बिरामीहरुले सेवा लिइसकेका छन् । आठ बेड भएको स्पाइनल इन्जुरी केन्द्रको छुट्टै फिजियोथेरापी कक्ष समेत रहेको छ । स्पाइनल इन्जुरी केन्द्रलाई गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने तयारी भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
मिस नर्स चितवनको दोस्रो संस्करणको फाइनल मंसिर १७ गते हुने
मंसिर १२ ।
मिस नर्स चितवनको दोस्रो संस्करणको फाइनल प्रतिस्पर्धा यही मंसिर १७ गते हुने भएको छ । सन् २०१४ मा पहिलो पटक आयोजना गरिएको मिस नर्स दुई वर्षपछि गत असोज २३ गतेदेखि दोस्रो संस्करणको छनौट सुरु भएको थियो । मिस नर्स २०१७ का लागि ३० जना सहभागी भएकामा १३ जना अन्तिम प्रतिस्पर्धाको लागि छनौट भएका छन् । विभिन्न समयमा उनीहरुलाई व्यक्तित्व विकाससँगै, अन्य सीप तथा तालिमहरु दिएर फाइनल प्रतिस्पर्धाको लागि तयार पारिएको आयोजक सहज मिडियाले जनाएको छ । चितवनमा रहेर नर्सिङ पढ्दै तथा नर्सिङ पेसामा आवद्ध भएका १८ देखि २५ वर्षसम्मका युवतीहरुले भाग लिएको प्रतिस्पर्धामा मिस नर्सको उपाधी जित्नेले २५ हजार रुपैयाँ नगद सहित एक लाख रुपैयाँ बराबरको पुरस्कार पाउने छन् । त्यस्तै प्रतियोगिताको फस्ट रनर अपले २० हजार रुपैयाँ नगदसहित ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको पुरस्कार तथा सेकेन्ड रनरअपले ५० हजार रुपैयाँ बराबरको पुरस्कार पाउने आयोजकले जनाएको छ । नर्सिङ पेसामा रहेका युवतीहरुलाई बाहिरी क्षेत्रमा समेत परिचित गराउने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरिएको सहज भण्डारीले बताउनुभयो । प्रतियोगितालाई वर्षेनि निरन्तरता दिने समेत आयोजकको भनाइ छ ।
वाम गठबन्धनद्वारा घरदैलो
चितवन, १३ मंसिर
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै चितवनमा उम्मेदवारहरुले घरदैलोलाई तीव्रता दिएका छन् । चितवनमा वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले नियमित रुपमा घरदैलो गर्दै आफ्ना उम्मेदवारका चुनावी एजेण्डाहरु स्थानीय जनता समक्ष लगेका छन् ।
चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा पर्ने भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १५ र १६ मा वाम गठबन्धनले घरदैलो गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रदेशसभामा एमालेका कृष्ण भुर्तेल तथा समानुपातिकको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि आफूलाई मन पर्ने दलमा मतदान गर्न सिकाउँदै वाम गठबन्धनका कार्यकर्ताहरुले घरदैलो गरेका छन् । समूहमा हिँडेका वाम गठबन्धनका कार्यकर्ताहरुले शिवघाट, फुर्तीचोक लगायतका ठाउँका स्थानीय जनतालाई निर्वाचनका दिनमा भोट हाल्ने सहि तरिका सिकाउँदै घरदैलो गरेका हुन् ।
जनताको मत अमूल्य हुने भएकाले मत खेर नजाओस् भनेर उनीहरुलाई मतदान गर्ने सहि तरिका सिकाउँदै घरदैलो गरेको कार्यकर्ताहरु बताउँछन् । वामपन्थी सरकारले विकास गर्ने योजना ल्याएर काम गर्न नपाउँदै सरकार ढालिएको उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै एक पटक वामपन्थीको बहुमतको सरकार निर्माण गरेर जनताको विकास निर्माणको चाहना पुरा गर्नुपर्ने पुष्प केसीले बताए । लामो समयदेखि देशमा राजनीतिक अस्थिरता आएकोले अबको निर्वाचनबाट वाम सरकार निर्माण गर्दै समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार गर्नुपर्ने केसीको भनाइ थियो ।
उक्त घरदैलोमा प्रदेशसभा उम्मेदवार कृष्ण भुर्तेल समेत सहभागी भएका थिए । भुर्तेलले जनताको हरेक सुखदुखमा साथ दिँदै आएको र आगामी दिनमा समेत उनीहरुको दुखसुखमा साथ दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।